Yekuzvigadzirisa matambo ndeyechazvino patent yakanyoreswa neApple yeApple Watch | IPhone nhau
Zvirokwazvo zvinhu zvishoma zvinogona kutishamisa panguva ino nenyaya yemapateni. Apple inyanzvi mukupa patent zvese zvainofunga kuti inogona kushandisa mune ramangwana kana kungoti inogona kukupa mari mukufamba kwenguva kana mumwe munhu achida shandisa iyi pateni tekinoroji.
Mune ino kesi isu tiri kubata neiyo patent yakanangana zvakananga neApple Watch uye kupfuura kungozvitarisa pachayo, netambo dzayo. Iyo itsva Apple patent yakanyoreswa muUnited States Patent uye Trademark Hofisi, inotiratidza iyo "otomatiki kugadzirisa kune inotakurika zvigadzirwa zvemagetsi" ndokuti, kuzvisarudzira matambo.
Iyo tambo yacho pachayo inowedzera nhevedzano yema sensors ayo anoona kukwana kwakakwana kweiyo wachi kune ruoko, zvichibvumira otomatiki kugadzirisa kana yave nguva yekupfeka wachi. Zviripachena kuti tambo inowedzera sarudzo yekusunungura tambo chero nguva uye mukana wekusimbisa kana kuisunungura nemaoko. Kuita izvi iyo patent inotaura nezve mavhavha, zvikamu zvinoshandiswa uye mabhegi egasi kuita ese mashandiro aanotaura.
Mune ino kesi, tambo dzinosimudzwa naApple dzinogona kunge dzakakora pane dzazvino, hapana kutaurwa nezvehukuru uye kana nezve mukana wekushandisa iyi patent munguva pfupi iri kutevera. Zvinotaridza pachena kuti uyu mushambadziro weApple Watch unogona kuwedzerwa maererano nemajeti, mabhanhire kana zvimwe zvakafanana mune ramangwana, asi hatifanire kufunga kuti ichi chichava chokwadi. Isu tatoona mamwe akawanda ma patents akawanikwa neApple akange asara mune izvo, mazita akanyoreswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yako yekuzvigadzirisa tambo ndeyechazvino patent yakanyoreswa neApple yeApple Watch
Apple inotipa shanduro yeTunes ine mukana weApp Store